အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ကို ဘယ်လိုတိုက်ဖျက်မလဲ? - DVB TV News
Posted by Aliff on July 20, 2017 in DVB Debate, အထူးအစီအစဉ်များ, အပတ်စဉ်ကဏ္ဍ
DVB Biz Debate – အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ကို ဘယ်လိုတိုက်ဖျက်မလဲ?
“ကော်မရှင်ပြန်မဖွဲ့ဘူးဆိုတော့ နိုင်ငံရေးစဉ်းစားချက်တွေများ ရှိနေလို့လား ဆိုပြီးကျနော်စဉ်းစား ကြည့်တယ်။သူများနိုင်ငံတွေမှာ သမ္မတအသစ်တက်လာလို့ရှိရင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုတိုက်ဖျက် ဖို့ကသူ့ရဲ့နံပါတ်တစ် Agenda ဆိုပြီးကြွေးကြော်တာ။အဲ့တာကြီး ကိုဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့ reform မှာကျန်တဲ့ ဟာတွေများရှေ့မရောက်မှာစိုးရိမ်နေလို့လားဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးထည့်သွင်း စဉ်းစားချက်ကြောင့်လားပေါ့နော်”
– ဦးခိုင်ဝင်း(director, Sandhi Governance Institute)
“ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အကျင့်ပျက်ခြစားမှုက အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခွန် အတုပ်မပေးရဘူး။လာဘ်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့ပိုက်ဆံက တကယ် တရားဝင် အစိုးရကိုပေးရတဲ့ပိုက်ဆံထက်အများကြီးသက်သာတယ်။အဲ့ဒီစီးပွားရေးကအကျိုးအမြတ်အဖြစ်ထွန်းဆုံးဖြစ်နေတယ်။အမှန်တော့အကျိုးအမြတ်မရှိဆုံးဖြစ်ရမယ့်ဟာက အကျိုးအမြတ်အရှိ ဆုံးဖြစ်နေတယ်”
“အစိုးရသစ်သက်တမ်းနဲ့အညီလို့ပြောလို့ရှိရင်အခုရှိနေတဲ့ကော်မရှင်အဖွဲ့က ငါတို့ဟာတရားဝင်သေးရဲ့လား၊မဝင်သေးရဲ့လားဆိုတဲ့အနေ အထားဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှတော့ သူတို့ဆီရောက်လာတဲ့ စာတွေကိုကိုင်တွယ်ဖို့အတွက်အရမ်းခက်ခဲမယ်။နောက်တချက်ကလဲသူ့မှာဘယ်လောက်အထိလုပ် ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသလဲဆိုတာကလည်း မေးစရာဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့ကျမတို့က ကိစ္စတော်တော်များ အတွက် third party ထားမယ်ဆိုရင် အဂတိလိုက်စားမှုကအတော်အတင့်ကျဆင်း သွားမယ်ဆိုတာ ကို ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးထားပြီး အဆိုလည်းအောင်ထားတယ်။ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ တော့အကောင် အထည်ဖော်မှုအပိုင်းက နည်းနည်းလေးနှေးနေတယ်”
– ဒေါ်ကြည်ပြာ (ရန်ကုန်တိုင်း လွှတ်တော်အမတ်)
“ပြဿနာက ဥပဒေရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့် မဟုတ်ဘူး။ဥပဒေကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့ ယန္တရားနဲ့ အဲ့ဒီ့ယန္တရားကို အကောင်အထည်ဖော်ရတဲ့ အဆင့်ဆင့်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အားနည်းချက်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီတော့ဥပဒေကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်တဲ့ နေရာမှာအားနာခြင်း၊ကြောက်ရွံ့ရခြင်း နဲ့ အဲ့ဒီ ဥပဒေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကို အဂတိလိုက်စားနေရတယ်ဆိုကတည်းက မဟုတ်တော့ဘူး”
DVB TV – 20.07.2017
YBS ငွေပုံးစနစ်အသုံးပြုမှာမို့ ယာဉ်နောက်လိုက်များ အခက်အခဲဖြစ်မှာ စိုးရိမ်
အကျဉ်းထောင်က (၁၀)တန်းအောင်သူတွေကို အဝေးသင် ဆက်တက်ဖို့ စီစဉ်ပေးမယ်
4225 April 7, 2018
4750 April 2, 2018
4229 October 30, 2017
6444 October 27, 2017
3995 October 20, 2017